FCHC र COVID -19 - Falls चर्च स्वास्थ्य सेवा केन्द्र
FCHC र COVID-19
यो पृष्ठ COVID-19 (कोरोनाभाइरस) स्वास्थ्य आपतकालको समयमा हाम्रो अपरेशनको बारेमा कुनै पनि अद्यावधिकहरूको लागि प्रयोग हुनेछ।
** अद्यावधिक ** मे १।। २०२१
कृपया सल्लाह दिनुहोस् जब कि भर्जिनियाको राष्ट्रमण्डलले COVID नियमहरूमा केही आराम गरीएको छ, हामी एक चिकित्सा सुविधा हो र अझै मास्क आवश्यकताहरूको अधीनमा छौं। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईको मास्कलाई तपाईको अपोइन्टमेन्टमा ल्याउन र लगाउन निश्चित हुनुहोस्।
हामी तपाईंलाई अत्यधिक सिफारिश गर्दछौं कि तपाईं तपाईंको COVID-19 खोप प्राप्त गर्नुहोस् COVID को प्रसार सुस्त बनाउन मद्दत गर्न जो इम्युनोसप्रेस भएका वा खोप लिन सकिदैन। भर्जिनिया १२ बर्ष वा माथि उमेरका निवासीहरू नि: शुल्क खोप लिन योग्य छन्। थप जानकारीको लागि हेर्नुहोस् https://vaccinate.virginia.gov/ .
फल्स चर्च हेल्थकेयर सेन्टर तपाईंको सेवा जारी राख्न गर्व छ,
र हामी त्यसो गर्न खुला रहन्छौं!
हामीलाई थाहा छ कि तपाईं COVID-19 (कोरोनाभाइरस) को बारेमा चिन्तित हुनुहुन्छ। तपाईंको स्वास्थ्यसेवा साझेदारको रूपमा हामी तपाईंलाई यो जान्न चाहन्छौं कि हाम्रो बिरामीहरू र हाम्रा कर्मचारीहरूको स्वास्थ्य हाम्रो प्राथमिकता हो। FCHC मा हामी सबैलाई स्वस्थ राख्न अतिरिक्त सतर्क हुन थप कदमहरू चाल्दैछौं। हामीलाई थाहा छ कि यो महत्त्वपूर्ण छ कि बिरामीहरूले आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सेवालाई स्थगित गर्दैन, विशेष गरी गर्भपतन सेवाहरू, गर्भपतन हेरचाह ढिलाइले जोखिम र लागत बढ्न सक्छ।
हामी द्वारा सिफारिस गरिएको स्वास्थ्य र सुरक्षा दिशानिर्देशहरूको पालना गर्दैछौं अमेरिकी मेडिकल एसोसिएसन, को विश्व स्वास्थ्य संगठन, को रोग नियन्त्रण र रोकथाम लागि केन्द्र र राष्ट्रिय गर्भपात संघ। कृपया नोट गर्नुहोस् कि, सबैको सुरक्षाको लागि, हामीले लागू गरेका छौं अस्थायी बिरामी र आगन्तुक प्रक्रियाहरू। हामीले यी सबै बिरामीहरू र कर्मचारीहरूको स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्नका लागि राखेका छौं, र शारीरिक फैलावटलाई कम गर्न र समुदायको जोखिम कम गर्न।
निम्न दिशानिर्देशहरू ठाउँमा छन्:
सबै बिरामीहरूले हाम्रो स्वास्थ्य स्क्रीनिंग प्रश्नावली पूर्ण गर्नु पर्छ। हामी सुनिश्चित गर्न चाहन्छौं कि हाम्रो क्लिनिकमा प्रवेश गर्ने सबैले COVID-19 भाइरसका लक्षणहरू प्रदर्शन गरिरहेका छैनन्। श्वसन र / वा फ्लू जस्तो लक्षणहरू र / वा १०० of को ज्वरोको साथ बिरामीहरूएफ (.37.8 XNUMX..XNUMX डिग्री सेल्सियस) उनीहरूको नियुक्ति ठीक नभएसम्म पुनः अनुसूचित गर्न आग्रह गरियो। फ्लू जस्तो लक्षण समावेश:
मायाल्जिया (शरीर दुखाइ)
हामी दु: खी छौं कि हामी अब समर्थन मान्छे र / वा पर्यटकहरू समायोजित गर्न सक्नुहुन्न। हाम्रो सुविधा अब बिरामीहरू र स्टाफमा मात्र सीमित छ। (१ 18 बर्ष भन्दा कम उमेरका बिरामीहरूको एउटा अभिभावक वा कानूनी अभिभावक हुन सक्छ।)
सबै बिरामीहरू पर्छ केन्द्रमा सँधै तिनीहरूको नाक र मुख ढाक्ने मास्क लगाउनुहोस्। हामी तपाईंलाई दृढताका साथ सिफारिश गर्दछौं कि तपाई भवनको बाँकी भित्र पनि मास्क लगाउनुहोस्, चाहे तपाईंलाई खोप लगाइएको छ।
सबै बिरामीहरू केन्द्रमा प्रवेश गर्नु अघि उनीहरूको दाहिने हातहरू सफा गर्नुपर्दछ। हात सेनिटाइजर हाम्रो केन्द्रको लबीको साथै प्रवेशद्वारमा उपलब्ध छ। हामी पूर्ण रूपमा हात धुने सिफारिस गर्दछौं। हलवेमा त्यहाँ प्रसाधन कक्षहरू छन् जुन हात धुनेको लागि उपलब्ध छन्।
सबै बिरामीहरूले आफ्नो खाँसी कवचपार्नु पर्छ / टिसु वा स्लीभले धुनु पर्छ, र कम्तिमा २० सेकेन्ड पछि उनीहरूको हात साबुन र पानीले धुनु पर्छ।
सबै बिरामीहरूले उनीहरूको आँखा, नाक र मुख छुनु हुँदैन। भाइरस हामीले छुने सतहहरूमा र हाम्रो छालामा रहन सक्छ। यसले भाइरस आन्तरिक रूपमा फैलिने संभावनाहरूलाई कम गर्न मद्दत गर्दछ।
COVID-19 भएको व्यक्तिसँग भर्खरैको सम्पर्कमा आएका अविवाहित बिरामीहरूलाई उनीहरूको नियुक्ति पुन: मिलाउन भन्न सकिन्छ.
हामी तपाईंको सहयोगमा तपाईंको सहयोगको कदर गर्दछौं किनकि हाम्रो केन्द्रले हाम्रा सबै बिरामीहरू, कर्मचारीहरू र आगन्तुकहरूको लागि स्वस्थ वातावरण कायम गर्न कोसिस गर्दछ।
कृपया हामीलाई तपाईंको कुनै पनि प्रश्नको साथ सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस्: फोनबाट (703-532-2500) वा हाम्रो मार्फत सम्पर्क फारम.
अघिल्लो पोष्ट व्यवसायहरू जुन प्रजनन स्वास्थ्य समर्थन गर्दछ
अर्को पोस्ट हाम्रो भिडियोहरू हेर्नुहोस् - र हाम्रो केन्द्र भ्रमण गर्नुहोस्!